08 | May | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀) ရက် ဖဆပလညီလာခံ (ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ)တွင် သံဃာတော် များအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သာသနာရေး သီးခြား လျှောက်ထားချက်
(Rangoon) – The Burmese government should immediately reopen two madrasas, or Islamic religious schools, that local authorities sealed off in Rangoon on April 28, 2017, Human Rights Watch said today.
Maung Maung HRW က အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာ….တဲ့ ဘာသာပြန်ပေးပါ့မယ်…တဲ့
The government should publicly commit to protecting the right to freedom of religion for all religious communities in Burma, including in worship, observance, practice, and teaching.
Sr General Than Shwe’s negligence after cyclone Nagis disaster led to increase in prostitution in Myanmar
Communist China’s exploitation on Myanmar by bribing Myanmar Generals and USDP leaders
May 8, 2017 May 8, 2017 drkokogyi
နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်သူ – ပုဂ္ဂို လ်ရေးကိုးကွယ်မှုနဲ့ လုပ်တဲ့သူ – ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်/ကိုယ့်နေရာအတွက်…လုပ်နေသူတွေ
နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်သူ…….
ပုဂ္ဂို လ်ရေးကိုးကွယ်မှုနဲ့ လုပ်တဲ့သူ………
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်/ကိုယ့်နေရာအတွက်…လုပ်နေသူတွေကတော့
အများကြီးပေါ့ဗျာ….
ပါးပါးလေးမှ ပါးပါးလေး (မွတ်စလင် လူငယ်များသို့ ရည်စူးပါသည်။)
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ဟာ ဗမာ့မွတ်စလင်တွေထဲမှာတော့ အတုမရှိ တဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်အဖြစ် ကျနော် သတ်မှတ်ပါတယ်။ နောက် သူရဲကောင်းအဖြစ် ကျနော့် သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ အကြုံးဝင်တာက ဆရာ မောင်သော်က ပါ။ ဘာကြောင့် ကျနော့် စံနှုန်းအရ သတ်မှတ်ရလည်း မေးရင်လည်း သူတို့ဟာ ဗမာနိုင်ငံတခုလုံးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့လို့ပါ။ တခြားသော နိုင်ငံတခုလုံးအတွက် အသက်စွန့် ကိုယ်ကျိုးမရှာဘဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဗမာနိုင်ငံသား အားလုံးကိုလည်း ကျနော် လေးစား အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။